Software Popular – Windows – Page 25 – Vessoft
Software Popular – Windows – Page 25
EaseUS MobiSaver 5 Free iyo Pro
Phone software The inuu ka soo kabsado xogta on, iPhone iPod iyo iPad. software waa ay awoodaan in ay soo kabsadaan xogta lumay ka hayaan iTunes iyo iCloud.
EaseUS Data Recovery Wizard 10.8 Free, Pro iyo Email
Saxannada software The inuu ka soo kabsado xogta oo kala duwan. software waa ay awoodaan in ay soo kabtaan faylasha lumay ama maqan ka qalab kala duwan oo xambaarsan xogta.
English, Français, Español, Deutsch... CrystalDiskInfo 7.0.4
العربية, English, Українська, Français... ConvertXtoDVD 6.0.0.64
العربية, English, Українська, Français... CyberLink PowerDirector 15
Songr 2.0.2378 Standard iyo Portable; 2.0.2235 beta Standard iyo Portable
Ciyaaryahan Media Ku haboon ciyaaryahan u ciyaaro videos qaab MKV. Software taageertaa muuqaalada caadiga ah iyo kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ama edit playlists ah.
Phone Tool si aad u eegto waxa ku jira qalab ka Apple. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan in nidaamka file ah qalab iyo si loo maareeyo codsiyada.
English, Français, Deutsch, 中文... Spark 2.8.1
Qabashada Screen Tool si ay u qoraan ugu baaqay cod iyo video Skype ee tayo sare leh. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u taagay duubo toos ah la wacay oo u qoraan tirada la doortay ee soo kabano.
Chat Macmiilku waxa uu si isgaadhsiin iyo dhaafsadaan files ee network IRC ah. Software waxay hubinayaan isticmaala iyo ka hortagtaa dajinta ee files xaasidnimo ah in shabakadda.
uTorrent 3.4.9.42606 iyo 3.4.9.42671 beta
Torrent Macmiilka ugu caansan inay soo dejisan iyo wadaagaan files ee internet-ka. Software waxay leedahay soo saarka sare iyo set ah muuqaalada waxtar leh oo waaweyn.
Far Manager 3.0.4774 iyo 3.0.4830 beta